ခင်လေးငယ် : May 2012
ဝိဉာဉ်သဲ့သဲ့ လှုပ်ဖူးသည် ~
ဖြူစင်ဝင်းပ ရွှန်းမြ၏ ~
လှုပ်ဖူးဝိဉာဉ် အရူးတည်း ~
Posted by Khin Lay Ngel at 5/14/2012 08:48:00 PM No comments:
တစ်ခါတရံတွင် အရာအားလုံးသည် ဖြစ်ခဲသလို ပျက်ရန် ဖျက်ရန် ခက်ခဲလှသည်။ သို့သော်လည်း တစ်ခါတရံတွင်မူ မထင်မှတ်သည့် စက္ကန့်ပိုင်းလေးတစ်ခု အတွင်းမှာပင် အကြောင်းအရာ အလုံးစုံတို့သည် ပျက်ဆီးခြင်းသို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ဦးတည်သွားတတ် ကြပါသေးသည်။ ကြည့်မြင်တတ်ရန် လိုအပ် ပါသည်။ နှလုံးသွင်းတတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထို့နောက် လက်ခံ ယူတတ် ရန် အလွန် အရေးကြီးကြောင်း ကျွန်မတွေး မိ လာပါသည်။
ထိုဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း သဘောသဘာဝတို့ကို ကျွန်မ၏ သေးငယ်သော ဦးနှောက်လေးတစ်ခုဖြင့် အလုံးစုံကို ကြည်ဖြူ စွာ အလိုက် သင့် လက်ခံယူတတ်ရန် ဝေးနေပါသေးသည်။ တစ်ဆင့်ပြိးတစ်ဆင့်၊ တစ်ထစ်ပြိး တစ်ထစ် သင်ကြား ယူနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ တရား ဓမ္မ ၌ ငြင်သာ သိမ်မွေ့စွာ မွေ့လျော်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ လေ့လာ ထိုက်သာ စာပေများ ဖတ်ယူခြင်းအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ အတွေးအခေါ် ရင့်ကျက်ခိုင်မာသော ကျွန်မ ဝန်းကျင်ရှိ လေးစား ထိုက်သူများ၏ ဆုံးမစကားများကို လည်းကောင်း၊ ဖတ်မှတ် ကြားနာ လက်ခံ နာယူရင်း ထွေပြား ရှုပ်ထွေးသော စိတ်၏သဘောကို သဘာဝအလျောက် နေထိုင်တတ်ရန် ကြိုးစား ကျင့်ဆောင်နေ ဆဲ ကာလလေး တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါသေးသည်။
လူ့ အသိုက် အဝန်း ၌ အလိုက်သင့် ချောမွေ့စွာ၊ ပေါပါးစွာ၊ နေထိုင်တတ်.. နေထိုင်နိုင်ရန်၊ ထိုက်သင့်သော လက်ခံမှုနှင့် လက်ခံ ယူတတ် ရန် မှာ ကျွန်မအတွက် မလွယ်ကူလှ သေးသော်ငြား လမ်းခုလပ်တော့ ရောက် လုနေပြီ။ စိတ်အလို ဆန္ဒကြောင့် ဖြစ်တည် လာသော အချစ်၊ အမုန်း၊ လောဘ၊ ဒေါသ၊ အာသီသ၊ တဏှာ တို့ဖြင့် ကျွန်မနပမ်းလုံး နေရပါသေးသည်။ သို့သော်လည်း လွန် ခဲ့လေသော နှစ်အချို့က ကျွန်မနှင့် ယ္ခု ကျွန်မ မတူပါ။
(၂၀၁၀) ခုနှစ်က ကျွန်မနှင့် (၂၀၁၁) ကျွန်မသည်လည်း မတူပါ။ အနီးစပ်ဆုံး မိမိကိုယ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့် မိသောအခါ မနေ့က ကျွန်မနှင့် ယနေ့ကျွန်မ သည်ပင် လုံးဝမတူညီပါ။ မိနစ် အပိုင်းခြားနှင့်အမျှ ပြောင်းလဲ၍ နေတတ်သော စိတ်၊ ခန္ဓာနှင့်ပင် ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှု လမ်းမ တစ်ခုပေါ်သို့ ဦးတည်၍ ကျွန်မ လမ်းလျှာက်တတ် လိုပါသည်။ (ကျွန်မ စိတ်အစဉ်၏) ပြောင်းလဲလာမှု ဖြစ်စဉ် ကို ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် နှလုံးသွင်း လက်ခံ ယူတတ်ရန် လိုအပ် ချက် များစွာ ရှိနေပါသေးသည်။
ကွေ့ကောက် သိမ်လှီသော လမ်းကျဉ်း များစွာ၊ မာယာများသာ လှေကားထစ်ပေါင်းများစွာ၊ နက်ရှိုင်း လွန်းသော ခြောက်ကမ်းပါးပေါင်း များစွာရှိသော ထိုလမ်းမများပေါ်တွင် ရဲရင့်စွာ နင်းလျှောက်ကျော်ဖြတ် ၍ လောက လမ်းမ ကျယ် တစ်ခု အပေါ်သို့ ခြေအစုံကို ခိုင်မာစွာ ချတတ်နိုင်ရန် ကျွန်မကြိုးစား နေပါ သည်။ လောက လမ်းမများပေါ်တွင် သိမ့်မွေ့စွာ၊ တည်ငြိမ်စွာ၊ မှန်ကန်စွာ၊ ကျွန်မ လမ်းလျှောက် တတ်လိုပါသည်။ အေးဆေး လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ လျှောက်လှမ်းတတ်ရန် ခိုင်မြဲသော ခြေအစုံကို ကျွန်မ လိုအပ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်း စွာ ကျွန်မ မျက်လွှာ ချလို ပါသည်။
လောကဓံတရား၏ မီးတောက်မီးလျှံတို့ကို ရဲဝံ့စွာ ကြည့်မြင်နိုင် မည့် မျက်လုံးလေးတစ်စုံ ကျွန်မ လိုအပ်ပါသည်။ ချစ်သူ၊ မုန်းသူ၊ လိုသူ၊ မလိုသူတို့ကို လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲနှင့် အတည်ငြိမ်ဆုံး ပြုံးပြတတ်ရန် (လှပဘို့ မလိုသော) နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာ ကျွန်မ လိုပါ သည်။ မိတ်ဆွေ၊ မိတ်ဆွေ မဟုတ်သူ၊ ကျွန်မကိုသိသူ၊ ကျွန်မကမသိသူ၊ အသားအရောင်တူသူ၊ ကွဲပြား သူ၊ ပညာ တတ်သူ၊ ပညာ မဲ့သူ၊ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာသူ၊ ချို့တဲ့သူ၊ ကျွန်မကို လိုလားသူ၊ ကျွန်မကို မုန်းတီးသူ၊ လူအားလုံး ကို ချစ်ခင် တတ်ရန် ကျွန်မ တွင် ရှိနေသာ နှလုံးသားကို ပိုမိုဖြူစင် သန့်ရှင်း လိုပါသည်။
(အလုံးစုံ မပြည့်ဝသေးသော်လည်း) ကြိုးစားဆဲ ကာလ လမ်းခုလပ်လေးမှာပင် သဘာဝလောကနှင့် အနီးစပ် ဆုံး သော သိရှိနေထိုင် မှု အသိတရား တစ်ခုဖြင့် မြင်မြင် သမျှ အမြင်အာရုံ၊ ကြားကြားသမျှ အကြား အာရုံ၊ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း သဘော သဘာဝ တို့ ၏ အကြောင်း အကျိုး အရာရာ ကို ချစ်ခင်စွာ၊ တန်ဖိုး ထား စွာ၊ လှိုက်လှဲ စွာ၊ လေးစား စွာ၊ လက်ခံ သင်ယူရင်း...
ယနေ့... ယခု... ကျွန်မနေထိုင်နေ ပါသည်။
မှတ်ချက်။။ ကျွန်မ တွေးယူ ကျင့်ကြံနေသော အကြောင်းအရာလေး တစ်ခု အား ချရေးခြင်း သက်သက် မျှသာ။ “လူတွေကို ချစ်ပါ.. လူတိုင်း ကို ချစ်ပါ.. များများချစ်တတ်ပါစေ..” ဟု ခဏခဏ မှာတတ်သည့် ချစ်သော မွေးသမိခင် “မေမေ” နှင့် ကျွန်မ၏ စိတ်နှလုံး ကို ပိုမိုသန့်စင်လှပစေရန် လမ်းပြသွန်သင် ပေးတတ်လေ့ ရှိသော “ကိုကြီး” တို့အား ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by Khin Lay Ngel at 5/14/2012 05:47:00 PM No comments:
စံပယ် ~ တဲ့လား..!!
တစ်ခင်းလုံး ထဲ ပြုတ်- ပြုတ်- ကျနေတော့တာ
သူ့ ရနံ့တွေ နဲ့ ထုံသင်း~
ဒါ... ကျွန်မ စံပယ်ခင်း~
Posted by Khin Lay Ngel at 5/14/2012 05:26:00 PM No comments:
“လ” လေးက ခပ်ကွေးကွေး... တိမ်တွေက တစ်ချို့တစ်ဝက် ပြေးဆော့လို့... ဒီည ကောင်းကင်က ပြာမနေပါဘူး။ ခပ်မှိုင်းမှိုင်းနဲ့... ကြယ်လေးတွေ တစ်လုံး.. နှစ်လုံး.. သုံးလုံး.... မြင်နေရတဲ့ မြင်ကွင်းထဲမှာ ရှိနေ တာ သေချာ ရေကြည့်မယ်ဆိုရင် အားလုံး တစ်ဆယ့် သုံးလုံး တိတိ..။ လင်းတစ်ခါ မှိန်တစ်လှည့်နဲ့ မှိတ် တုတ်တုတ်..။
ဆောင်း ရဲ့လေက အေးစက်စက်.. လေအသော့မှာ ညိုထွေးထွေး ဆံနွယ်တွေကဝေ့ဝဲ... ပါးပြင်တွေက တင်း ခနဲ... စိတ်တွေက လေးလံ လွန်းနေဆဲ...။
တစ်စုံတရာပေါ်မှာ စီးမျောနေတဲ့ တစ်စုံတရာဟာ နဂါးငွေ့တန်းတွေလို ရစ်သိုင်းလို့... မှုတ်ထုတ်မိတဲ့ သက်ပြင်း ဟာ ဘာ အရောင် ရှိနေလဲ ကျွန်မ မသိ...။ နားလည်ရခက်တဲ့ အရောင်တွေကို နံမည် တတ်ရ လောက်အောင် အထိ ကျွန်မဟာ စိတ်ရှည်သူ မဟုတ်..။ လ နဲ့ အနီးဆုံးနေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ကြယ် တစ်ပွင့် ကို ငေးမောနေဖို့တော့ ကမ္ဘာမှာ စိတ်အရှည်ဆုံး မိန်းမ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ် ပါလိမ့် မယ်...။
ကျွန်မဘေး မှာ သီချင်းတစ်ပိုဒ် ရှိချင်ရှိမယ်... တစ်ပိုင်းတစ်စ ကဗျာ နှစ်ကြောင်းလောက်လည်း ရှိနေနိုင် တယ်.... ဒါမှမဟုတ်.... ရနံ့လေး တစ်ခု...!! ချိုအီအီအနံ့ မဟုတ်တာ သေချာတယ်... ခါးသက်သက် အနံ့ ဟုတ် မဟုတ်တော့ မဝေခွဲနိုင်ဘူး... ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အတွေးတွေ ခါးသက်သက် ဖြစ်လို့နေတာတော့ အမှန်..။
အာခေါင်တွေက ခြောက်ကပ်ကပ်.. မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်မှာတော့ စိုစွတ်စွတ်...။ လေ နဲ့ အတူ ယိမ်းနေတဲ့ ဆံပင်တွေက အရိုင်းဆန်လာသလို... ငေးကြည့်နေမိတဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ရဲ့ အလင်း က စူးစူးလို့ လာနေပေါ့...။ စိတ်တွေ ကို စိတ်နဲ့ကုစားဖို့ စိတ်တွေဟာ အဆိပ်သင့်နေခဲ့ပြီးသား..!! အမှတ်တရ ဆိုတာတွေကို အမှတ် ရနေဖို့ လုံလောက်တဲ့ ဦးနှောက် တစ်ခုနဲ့ သိပ်ကိုအမှတ်တရ ရှိနေပြန်ရော..။
တမ်းတ လွမ်းဆွတ်ခြင်းကို ခူးဆွတ် ဖို့ ရူးနေတဲ့ အရာဟာ အထစ်ထစ် အငေါ့ငေ့ါ ပဲ မဟုတ်လား..!! သေချာတယ်... တိတ်ဆိတ် တဲ့ ညနဲ့ လကွေးကွေး ဟာ ကျွန်မကိုကယ်ဖို့ သူရဲကောင်းမဟုတ်... ကြယ် ကို တလို့ ရသ တစ်ပိုဒ် ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိတာ လည်း အမှန် တရားပေါ့။ ဒါဟာ... အသက် မဲ့တဲ့ တမ်းချင်းသေတစ်ပိုဒ်...။
အဓိပ္ပါယ် ရှိဖို့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ ဥာဏ်နဲ့စဉ်းစားမှတော့ အချီးအနှီးတွေသာ လက်ထဲပြုတ်ကျလို့ ကခုန်နေကြ ...။ အဲ့ဒီ ကြယ်ပေါ့.... ကျွန်မ ကို ငေးစေ ခဲ့တာ... မှင်တက်အောင်ပြုစားလို့... ဟော... ကြည့်..!! ခုတော့ စူး ရှရှ အလင်းတွေ နဲ့ ရသ တစ်မျိုးဖြစ်အောင် သိမ်းသွင်း ဖန်တီး လို့ နေပြန်တာ...။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်... ကျွန်မ ဆက်ငေးနေ မိဆဲ... တွေးနေ မိဆဲ... မျောလွင့်နေမြဲ...။
အမုန်း တရားတွေ နဲ့ နာကျင်စွာ ပိုင်နိုင်စွာ မျက်လုံး တွေ ပိတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ဒါဟာ.. အလကား....!!
သွေးတောင့် လာတဲ့ နာရီတွေတောင် လေးပင်လို့ ပျင်းရိငြီးတွားရင်း ရပ်တန့်ကုန်ကြပေါ့....!!
ကောင်းကင် ရယ်.. လကွေးကွေးရယ်.. ကြယ်တစ်ပွင့်ရယ်.. မိန်းမတစ်ယောက်ရယ်..။ ငေးနေတုန်း “ဝုန်း” ကနဲ ကြယ်ကကြွေ ကျ... မိန်းမ တစ်ယောက်လည်း နွမ်းလျစွာ ဒူးထောက်မြေခ...။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခါမိတဲ့ ခေါင်း နဲ့ ယောင်ယမ်းလို့ မျက်ဝန်းအမှိတ်မှာ စီးကြောင်း တစ်ခုက ပါးပြင်ပေါ်မှာ နွေးခနဲ...!!
လက်သွား တဲ့ ပုလဲပွင့်တွေက လအရောင်မှာ ဝင်းကနဲ..........................။
Posted by Khin Lay Ngel at 5/14/2012 05:06:00 PM No comments:
အနှောင်အတွယ်တွေကို မုန်းလွန်းလို့ပါ ။
အတွေးတွေကို လိုရာ လွှင့်နေချင်လို့ပါ ။
စိတ်တွေနောက်ကို စိတ်တွေလိုက်နေချင်လို့ပါ ။
ဘာတွေလဲ.. ဘာတွေလဲ ကွယ်...!!
ကိုယ့်အတ္တတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်မွေ့ပျော်နေလို့ပါ ။
ကိုယ်တိုင်က အတ္တတွေနဲ့ ထုံချယ်ထားတဲ့ မိန်းမမို့ပါ ။
ကျွန်မ တစ်ကိုယ်တည်း ကြေကွဲစွာနဲ့ အတောင်ပံခတ် နေချင်လို့ပါ ။
Posted by Khin Lay Ngel at 5/11/2012 08:09:00 PM No comments:
ကဲ.. ကျွန်မ ရှင့်ကို မေးလိုတဲ့ မေးခွန်း စပါပြီ..။ ရှင် ပြောပြောနေတဲ့ “သူ..” က ဘယ်လိုလူများပါလဲ..??
ရှင်းရှင်းလေးပါဗျ..။ သူက ကျနော် သိပ်ချစ်တဲ့ အမျိုးသမီးလေး ပေါ့ ~ တကယ့် ကလေးလေး ဆိုလည်း ဟုတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ချွဲ တတ်သေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း ဂျစ်ပေပေ နဲ့ ဆိုးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန် မဆို သူ့ကို မေးရင် ~ “ချစ်တယ်" လို့ အမြဲ ပြောလေ့ရှိတယ်။ သူ့မှာ ချစ်စရာ ဘယ်အချက်တွေ ရှိသလဲလို့ မေးကြမှာလား..!! တကယ် က သူ လွတ်လပ်စွာ ဖြစ်တည်နေ တာလေးကိုက ချစ်စရာလေး ဖြစ်နေတာ ပါဗျ... ချစ်ခြင်း သက်သက်က သူ၊ ချစ်တယ် ဆိုတာ ကိုယ်၌က သူ ~ ပဲ။ သူ့မှာ ချစ်စရာဆိုတဲ့ အခြား အချက် သပ်သပ်ခွဲထွက် မနေဘူး။ ဒါ့ကြောင့်... ကျနော် သူ့ကို ချစ်တာ က "သူ" ဆိုတဲ့ အားလုံးကို ချစ်တာ။ ချစ်ခြင်းကလည်း သူ၊ ချစ်တာကလည်း သူ၊ အချစ်ကိုယ်၌က သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ရော ဆိုပါတော့ ~
ရှင့် ချစ်သူက ဒါ့ကြောင့်လည်း ရှင့်ကို ပိုချစ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ် ထင်ပါရဲ့..!! ကျွန်မ တွေးကြည့်တာပါ..။
ဝါးးး “ဒါ့ကြောင့် လည်း ပိုချစ်တာ” တဲ့လား ~~ အင်မတန် ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ စကားပဲ။ ဟုတ်တယ် ~ ခင်ဗျား သူ့ဆီက ဘယ် အချက်တွေ ကို ထောက်ပြမလဲ..!! သူ့ကို ဘာတွေ လက်ညှိုးထိုးပြဦးမလဲ..!! အဲ့ဒီ ထောက်ပြတဲ့ အချက် ကို မြင် ရင် ကျနော် ပိုချစ် မှာပဲ။ နောက် တစ်ချက် ထောက်ပြဦးမလား..! ကျနော် ပို~ ပို ~ ချစ်မှာပဲ.. ဘာလို့ဆို ~ ကျနော် သူ့ကို ချစ်တာက - "ပို~ ပို ပြီး" ဆိုတဲ့ ပုဒ် တစ်ခုသာ သုံးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါလည်း အနီးစပ်ဆုံးပဲ။ ပိုပိုပြီး ချစ်လာဖို့ ~ ကျနော်နဲ့ သူ့ကြားမှာ ~ ပို ~ ပို ~ တိုးလာဖို့~ ပိုချစ် တယ်ဆိုတာပဲ ရှိတယ်။ ဥပမာ ပေးရရင် အချိန် လိုပေါ့ဗျာ..တစ်ထစ် တက်သွားတဲ့ နာရီလက်တံလေးဟာ ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန် မဆုတ်ဘူး.။ ဆုတ်လို့လည်း မရဘူး ။ ရှေ့ဆက်ပြီး တစ်တက်တက် - ပိုတိုးသွားနေဖို့ပဲ မဟုတ်လား..!! ရှေ့ကို တစ်ထစ်ချင်း တက်သွား တယ်။ ပိုပိုပြီး တိုးသွားတယ်။ ပိုပြီးတိုးပွား သွားတာလေးကိုပဲ "ချစ်တယ်" လို့ ဝိဂြိုလ် ပြုရပါမယ်။ ~ဟုတ်တယ် ~ ခင်ဗျား ဘယ်အချက် ထောက်ပြ ပြ ~ ကျနော် သူ့ကို ပို ပိုပြီး ချစ် တယ်.. ဒါ အရိုးရှင်းဆုံးပဲ။
အများကြီးပါရှင်.. ကျွန်မ သူ့ကို သိနေသလောက်.. မြင်နေသလောက်.. ထောက်ပြချင်စရာတွေက အများကြီးပဲကော...
ပျော်စရာ ကောင်းလိုက်တာ ~ လို့ပဲ ပြောရတော့မယ်။ ခင်ဗျားမှာ သူ့ကို ထောက်ပြချင်စရာ များလေ~ ကျနော် ချစ်ရတာ များလာလေပေါ့
ရှင် အဲ့တာတော့ ပိုပြီ ထင်တယ်.......
ဟင့်အင်း ~ ခင်ဗျား အခုပြောတဲ့ “ပို” ဆိုတဲ့ စကား က ~ စောနက "ပို" ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မတူဘူး။ အခု ခင်ဗျား ပြောတဲ့ "ပို" ဆိုတာ - ကျနော် မဟုတ်တာကို အဟုတ်လုပ် ပြောတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာ။ ဟုတ်တယ်မှလား?? တကယ်က ကျနော် မဟုတ်တာကို ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ မယုံရင် ခင်ဗျား ခဏလောက်လေး ကျနော့ရင်ကို ကြည့်ကြည့်..!! ဒါမှမဟုတ် ~ ကျနော့ချစ်သူ သူ့ ရင်ထဲကို ကြည့်ကြည့်..!! ခင်ဗျားတို့ မမြင်ဖူးတဲ့ အရာလေး ကို မုချ မြင်ရမှာပဲဆိုတာ ကျနော် လောင်းရဲပါရဲ့..။ အဲ့ဒါလေးကို မြင်ရင် ခင်ဗျား တို့ သိမှာပဲ..။ တအံ့တဩ မိန်းမော သွားကြမှာပဲ..။ ကျနော်တို့မှာ ဘယ်လိုအရာကိုမှ ပူပန်စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ ရှိမနေကြဘူး.. မြင်ရဲ့လား။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ထားရှိတဲ့ ချမ်းမြေ့စိတ်ကလေး တစ်ရံစာမှ မပြတ်လပ် သွားဘူး ~ အဲ့ဒါကော တွေ့ရဲ့လား။ တကယ် လို့ ခင်ဗျားမှာ နှလုံးရောဂါတွေဘာတွေ ရှိမယ် ဆိုရင်တော့ ကျေးဇူးပြုပြီး မကြည့်ပါနဲ့ ~ ကျနော် အဲ့လိုပဲ တားရလိမ့်မယ်။ ဘာလို့ဆို သူနဲ့ ကျနော် နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ အဲ့ဒီ အံ့ဩစရာ၊ မိန်းမောသွားစရာ အရာလေးက တကယ် ကြည်ကြည် လင်လင်လေး ကျိန်းသေ ရှိနေတယ်။ ခင်ဗျား ရင်ထဲ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ဆိုင်တာပေါ့ မိတ်ဆွေရဲ့.. ခင်ဗျား ရုတ်တရက် အသက်ရှုရပ်သွားနိုင်တယ် ~ အဲ့ဒါ အတိအကျပဲ။
ကဲ.. ထားပါတော့.. ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရှင် ပြောသလိုဆိုရင် သာမာန် ကျွန်မ အနေနဲ့တော့ နည်းနည်း အံ့သြစိတ်လေး ဖြစ်မိပါရဲ့။ ရှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ.. ရှင်ချစ်နိုင်တဲ့ အချစ်ဟာ သေးသေးလောက်တော့ ပိုနေနိုင်မလား လို့ပါ။
ဟင့်အင်း ~ ကျနော့ အထင် ~ လိုတောင် လိုနေသေးတယ် လို့ ပြောရမယ်။ ဘာလို့ဆို ~ သူ့ကို ကျနော် ချစ်တာ ~ ပြောပြလို့ မှ မရဘဲကိုး..။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေတယ်.. ကြည့်ကြည့်ပါ... ကျနော်တို့ ကြည်လင်နေတယ်.. ဘာအတားဆီး ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်မျိုး အောက်မှာမှ မဝင်ပါဘဲ- အရှင်းဆုံး ရှိနေတယ်။ အခုလောက် ပြောပြနေတာတောင် ကျနော် တို့ တကယ်ချစ်တဲ့ အဖြစ် ကို ခြေဖျား မထိသေး ဘူးဗျ..။ တစ်နည်းဆိုရရင်~ ကျနော် အခုပြောနေတာက~ တကယ့်အဖြစ်ကို အတိအကျ ပြောပြနေနိုင်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်ချင်း ဖြစ်ရင် ~ လျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ ပြောနေတာမျိုးပဲ ဖြစ်နေဦးမှာ။
ကောင်းပြီ ရှင်တို့ အကြောင်းကို ကျွန်မ စာရေးရမယ်။ မေးစရာ အချက်တွေ ရှိလာခဲ့ရင် ရှင်ဖြေပေးနိုင်မလား..??
အိုး ~ သူ့အကြောင်း၊ သူ့ကို ချစ်တဲ့အကြောင်း လား။ ~ ကျနော့ခေါင်းကို ကောင်းကောင်းရိုက်ခွဲထားခဲ့ရင်တောင် ~ ကျနော် ဖြေနိုင် ပါလိမ့်ဦးမယ်။ ကျနော့ရင်ကို သွေးစိမ်းရှင်ရှင် ခွဲထားဆဲ ရှိနေတယ် ဆိုပါစို့ ~ အဲ့အချိန် ဆိုရင်လည်း (ကျနော် သိနေပါတယ်) ကျနော် ချက်ချင်း ဖြေနိုင်တယ်။
ရှင် အခု ပြောသွားတာလေး သေချာမှတ်ထားနော် ကျွန်မ မေးစရာ ရှိလာရင်မေးမယ်.. ကျွန်မ သူ့ကိုလည်း ပိုမို လေ့လာကြည့် ပါရစေဦး။ ရှင်ပြောတာ ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့..!!
ကောင်းပြီ ~ ခင်ဗျားလည်း တစ်ခု ပြန်မှတ်ထားပေးပါ ~ ကျနော် ပြောပြဖြစ်ကောင်း ပြောပြမယ့် အကြောင်းအရာတွေဟာ စကားလုံးတွေ၊ ဝေါဟာရတွေပါ။ တကယ့် အဖြစ်၊ တကယ့်အချစ်က- ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင် မတွေ့ကြုံမိ မချင်း မသိမမြင်ပဲ ဖြစ်နေသေးဦးမှာ~ ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့မှသာ ကောင်းကောင်း သိနိုင်မှာပါ။ အဲ့ဒါကို မှတ်ထားပေးပါ။ ကျနော် သူ့ကို ချစ်တာ က စကားလုံး မဟုတ်ဘူး။ ဝေါဟာရ၊ အကြောင်းအချက် မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျနော် ~.~.~.~.~ “သူ့ ” ~.~.~.~.~ ကို “ချစ်တာ”။ အိုခေ !? ခင်ဗျား ဆန္ဒရှိတဲ့ အချိန် မေးနိုင်ပါတယ်။
စကားလုံးတွေ.. ဝေါဟာရတွေ... ကဲပါ ~ ဟုတ်ပါပြီ.. ရှင်ပြောတာ ကျွန်မ သိတယ်.. သို့သော် ကျွန်မကတော့ စကားလုံးတွေ အဖြစ် အသွင် ပြောင်းရလိမ့်မယ်..။ ဒါဟာ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အလုပ်မို့ပဲ..။
ခင်ဗျားရဲ့ ကြိုးစားမှုအတွက် ကျနော် ဝမ်းသာပါတယ်.. တကယ့် အဖြစ်ကို မီမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိနေတာလေး အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ။ အဲ့ဒါလေး အတွက်တော့ ကျနော် စိတ်မကောင်းဘူး။
ကျွန်မအလုပ် ကျွန်မလုပ်တာပါ..။ ရှင် ချီးမွမ်းဖို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖို့ အဲ့တာတွေ မလိုအပ် လှပါဘူး..။ ကျွန်မ ရှင်တို့ကို စိတ်ဝင်စားတယ်.. အေးမြတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ အကြောင်း သိလိုတယ်.. လေ့လာနေဆဲ ~ ခုချိန်မှာတော့ ရှင်တို့ကို လေ့လာနေတယ် ဆိုတဲ့ ဒီ အလုပ်ကို ကျွန်မ ဆက်လုပ်နေပါတယ်.. ဒါလေးပါဘဲ..။
အဟားး ပြီးဆုံးတဲ့ လေ့လာမှုတော့ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးဗျနော..
အတိုင်းတာ တစ်ခု အထိတော့ ကျွန်မ စွမ်းဆောင်နိုင်မှာပါ....
ကောင်းပါပြီ ~ ခင်ဗျားကို ထောက်ကူသောအားဖြင့် ~ ကျနော် လမ်းစတစ်ခုလောက် hint ပေးထားချင်ပါတယ်။
“ကျနော်တို့” ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ ခင်ဗျား ဘယ်တော့မှ မလေ့လာပါနဲ့။
သူ နဲ့ ကျနော် ဆိုတာဟာ နှစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်တည်း ~ တစ်ဦးတည်း ပဲ။ ကျနော်နဲ့ သူ ချစ်ကြတာဟာ - ကျနော် ဟာ ကျနော် ဖြစ်လို့၊ သူဟာ သူဖြစ်လို့ - ချစ်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော် ဟာ သူဖြစ်ပြီး၊ သူဟာ ကျနော် ဖြစ်နေလို့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ကင်ပွန်း တပ်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါလေး ထပ်မှတ် ထားပါ။ ဒါလေးပါပဲ ~ အောင်မြင်ပါစေ.။
Thank you ပါ ~ ကျန်တာ ကျွန်မ ကိစ္စ ဖြစ်သွားပြီ..။
ထပ်ပြောပါရစေ ~ ခုလို ပြောပြတဲ့ ခဏလေးအတွက် ရှင့်ကို ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
ခင်ဗျားတို့ သိလိုတဲ့ လွတ်လပ်အေးမြတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစစ်စစ်ကို တကယ် သိနိုင်ကြပါစေဗျာ ~
Posted by Khin Lay Ngel at 5/09/2012 08:01:00 PM2comments:
အချစ်နဲ့စ အလွမ်းနဲ့ ဆုံးရမယ့်ဇာတ်
မ က ချင်လည်း ငါ... က... ရ... ပေါ့...။
မင်း အလိုကျ ငါ က နေမိမှတော့
ငါ့ က ကွက်ဟာ လှပါဦးမလား..!!
ငါ့ က ကွက်ကို ငါနိုင်ဖို့
ကြိုးစား က ရင်း က ကွက် တွေပျောက်
ငေါက် ကနဲ လည်း ရပ်မရ
ငါ့ကို နှောင်တွယ်ထားတဲ့ ကြိုး
ရှည်လွန်း မက ရှည်ဖို့ မင်း ပျိုးနေမှတော့
အထပ်ထပ်ငြိတာ ဆန်းတယ်လို့ မဆိုသာ...။
အသက် ကို ဖွဖွရှူရင်း
ဒုတိယ က ကွက်ကို က ဖို့စနင်း
ခြေအချ မှာ လမ်းပျောက်ကာ
ကူပါ ကယ်ပါ တစာစာလည်း မအော်သာပေါ့..။
ငါ့လက်ကို မ ငါ့ခေါင်းက ထ
ငါ့ခေါင်းကို မ ငါ့ခြေက ကြွ
ငါဟာ အပုံ့လိုက် လဲ.. ပြို.. ကျ...။
မင်း လိုတာလည်း မရမှတော့
အနိစ္စ သဘောကို နမ်းရှိုက်
ငါ့ကြိုးတွေ ကို ဖြတ်ကိုက်
မမြဲခြင်းတရား ကို သက်သေပြလိုက်...။
Thursday, March 19, 2009 ~ 11:49 AM
Posted by Khin Lay Ngel at 5/04/2012 01:20:00 AM No comments:
~~~ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ခံစားမှု ~~~
ဒီရေတွေလို တက်လိုက်ကျလိုက် ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မစိတ်တွေရဲ့ ရွေ့လျားမှုကို ဘယ်လိုမှန်အရိပ်မှာ ပုံဖော်ကြည့်လို့ မြင်ရ နိုင်ပါသလဲ..!! လေငြိမ်နေတဲ့ ရေကန်သေ တစ်ခုက သဲ့သဲ့လေးမှ လှုပ်ခတ်မှုမရှိတဲ့ ရေပြင်လို၊ ဒေါသတွေနဲ့ ခက်ထန်နေတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကျယ်က ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရေလှိုင်းတွေလို၊ ငြိမ်သက်သွားလိုက် ပရမ်းပတာ လှုပ်ရှားသက်ဝင်လာလိုက် ဖြစ်နေဆဲ ကျွန်မ နှလုံးခုန်သံတွေရဲ့ အသံဝေ့ဖ်တွေကိုရော ဘယ်လိုကရိယာမျိုးနဲ့ တိုင်းယူလို့ ရနိုင်ပါသလဲ..!!
ရနိုင်တယ်ပဲ ဆိုပါဦးလေ.. ကျွန်မမျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်လို့ မြင်နိုင် မမြင်နိုင် ကျွန်မနားတွေနဲ့ နားထောင်လို့ ကြားနိုင် မကြားနိုင် ဆိုတာမျိုးကို ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှု မရှိပြန်ဘူး။ သွေးလေ ခြောက်ခြားတဲ့ ညတွေမှာ သတိမထား မိလိုက်ပါပဲ “ဖေဖေရေ..” လို့ ယောင်ယောင်ပြီး အော်ခေါ်မိတဲ့ ကျွန်မအသံကို ဖေဖေ ကြားနိုင်မှာတဲ့လား။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် အားရကျေနပ်မှု မရှိခြင်း သက်သက်တွေနဲ့ ဖေဖေ့ကို ခုတလော သိပ်ကိုတမ်းတနေမိခြင်းပါပဲ..။
မတောက်တခေါက်သာ တီးတတ်တဲ့ ဂစ်တာ.. ကြိုးတွေ မညီချိန်မှာ ဖေဖေ့ လက်ချောင်း ရှည် သွယ်သွယ်တွေကို ကျွန်မ တမ်းတမိတယ် ဖေဖေ..။ ကျွန်မ လက်ချောင်း သေးသေးလေး တွေကို စိတ်ရှည် လက်ရှည် ဆုပ်ကိုင်ရင်း ဂစ်တာကော့ဒ်လေး တစ်ခုကို စသင်ပေးခဲ့ တုန်းက ပုံရိပ်တွေက လေပွေတွေလို ကျွန်မကို ပွေ့ဖက်လို့...။ ကျွန်မနဖူးနဲ့ ပါးလေးတွေကို နမ်းတိုင်း ရတတ်တဲ့ ဖေဖေ့ နှုတ်ခမ်းက ဆေးလိပ်နံ့တွေကို ကျွန်မ လွမ်းဆွတ်လိုက်တာ..။
ဖေဖေက ကျွန်မ မသိအောင်စဖို့ နောက်ကွယ်က တိတ်တိတ်လေး လာခဲ့ချိန်တိုင်း ဆေးလိပ်နံ့တွေ စွဲကပ်နေတဲ့ ဖေဖေ့ ကိုယ်နံ့လေးကို ကျွန်မက ကြိုရနေခဲ့ပြီးပြီ..။ ကျွန်မဟာ ဖေဖေ့သမီးလို့ ထွေထွေထူးထူး ဘယ်သူ့ကိုမှ လိုက်ပြောစရာမလိုပဲ ရုပ်ရည်ကော ဝါသနာ အမူအကျင့်တွေပါ အားလုံး တူနေခဲ့တာလေ..။ ကလေးလေး ဘဝကတည်းက အပျိုကြီးဖားဖား ဖြစ်တဲ့အထိ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ရောက်တိုင်း ဂျင်းဘောင်းဘီ တစ်ထည်ကိုဝတ်လို့ ဖေဖေ သွားလေရာနောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်တတ်တဲ့ ဖအေတူသမီး..။
ဖေဖေ ခရီးထွက်တဲ့ တောထဲတောင်ထဲ ခရီးကြမ်းကြမ်း ရာသီဥတု ကြမ်းကြမ်းတွေမှာ ဖေဖေနဲ့ အတူတူ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ ဖူးတဲ့နေ့တွေ...။ အိမ်မှာ ကျန်နေခဲ့တတ်တဲ့ မေမေ့ ဟင်းတွေကို လွမ်းဆွတ်ရင်း ဖေဖေနဲ့ကျွန်မ စကားထိုင်ပြောဖူးတဲ့ ညတွေမှာ ဖေဖေက ဂစ်တာလေးကို သဲ့သဲ့တီးနေခဲ့တာ..။ တောတောင်ဆိုတာ ဖေဖေ့သမီး ကျွန်မအတွက်တော့ မစိမ်းခဲ့တဲ့ အရာတွေပါပဲ...။ မည်းမှောင်နေတဲ့ သစ်တောတွေထဲမှာ ဘွတ်ဖိနပ် အထူကြီးစီးထားတဲ့ ဖေဖေ လမ်းတွေလျှောက်တိုင်း ကျွန်မ ဖေဖေ့လက် ကို တွဲခိုထားရင်း တူတူလျှောက်ခဲ့ကြတာ..။
ဖေဖေ အများဆုံး ဝတ်တတ် တဲ့ ဂျာကင်ကြီး တစ်ခု ကို ခုထက် ထိတိုင် ကျွန်မ အမြတ်တနိုး သိမ်းထား မိနေဆဲ ဆိုတာ လည်း ဖေဖေ မသိ နိုင်တော့ ပါဘူး..။ ဖေဖေ သွားလေရာ ကို ယူသွား တတ်တဲ့ ဂစ်တာလေးက အိမ် သေးသေး လေး တစ်လုံးထဲက ကျွန်းစားပွဲ ပုလေး ဘေးမှာ ထောင် ထား လျှက် ပေါ့..။ ကျွန်မ လည်း ရှိနေဖို့ မဖြစ်နိုင် တဲ့ အဲ့ဒီ အိမ်လေး ထဲမှာ ခုဆို ဖုန်လေး တွေ တက်နေ မှာပဲ..။ ဖေဖေ့ ဂစ်တာ အို လေး ရဲ့ ခေါ်သံကို ကျွန်မ အိပ်မက် မှာ တစ်ခါ တစ်ခါ ကြားရ တတ်သေး တယ်..။ ဖေဖေ့ သမီး ကျွန်မ လက်တွေ ကို သူ မျှော်နေတာ သိနေတယ်..။
"ခွင့်လွှတ်ပေး ပါ ဖေဖေ့ ဂစ်တာအိုလေးရေ... ကျွန်မ ဘဝ တစ်ခု အတွက် လမ်းမောတွေ လျှောက်နေ ရလို့ပါ..။"
~~~ ဖေဖေနဲ့ အတူတူ ~~~
ဆင်တွေကို စီးပြီး နှစ်ညအိပ် သုံးညအိပ် ခရီးတွေရဲ့ ကြမ်းတမ်းမှု ရသကို ကျွန်မ အပျိုပေါက်ဖြစ်ခါစ အရွယ်မှာ စ ကြုံဖူးနေပြီ..။ တော်ရုံတန်ရုံ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ငွေပေးဝယ်လို့မရနိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖေဖေနဲ့ အတူတူ ယူခဲ့ဖူးတဲ့ ဖေဖေ့သမီး ကျွန်မဟာ ဘယ်လောက်များ ကံကောင်းခဲ့ပါလဲ..!! ဖေဖေ့ တပည့်တွေ ချက်ကျွေးတဲ့ တောဟင်းပူပူတွေရဲ့ အနံ့တွေက ခုတောင်.. ကျွန်မဘေးမှာ မွှေးပျံ့လို့နေသေး...။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဟင်းတွေကို ဖေဖေနဲ့ တူတူ လိုက်စားခဲ့တာလည်း ကျွန်မပါပဲ.. တောကြောင်သားကြော်တို့ ယုန်သားကျပ်တိုက်တို့ မျောက်ချေးခါးတို့ ဆိုတာ ကျွန်မအတွက် ဘာဟုတ်သေးလို့လဲ..။
မြွေသားကြော်ကိုတော့ စားဖူးတယ် ရှိအောင် မြည်းကြည့်ခဲ့တုန်းက ဖေဖေက ပြုံးပြီး ကျွန်မကို သေချာစိုက်ကြည့်နေခဲ့တာလေ..။ အနက်ရောင် မဟုတ်တဲ့ မီးခိုးရောင် ဖေဖေ့မျက်လုံးတွေထဲက ဖိတ်လျှံလာတဲ့ အကြင်နာ မေတ္တာတွေက မီးပုံဘေးမှာ ထိုင်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်မ ပါးလေးတွေကိုတောင် မီးခိုးရောင်တွေ သန်းစေခဲ့သေးလား..!! မီလာရှီကာ စိုင်းဗေဒါ ဆိုတဲ့ ဦးနေအောင်ရဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက ပြကွက်တွေလို ဆင်ဖမ်းနေတာကို ဖေဖေ့လက်တွေ တင်းနေအောင် ဆုပ်ကိုင်လို့ တစ်နေကုန် တစ်နေခမ်းကြည့်ရင်း အသက်ရှူတွေ မှားခဲ့ရတာပေါ့..။
ဆင်မကြီးတွေ ကိုယ်ဝန်လွယ်တဲ့ အခါ ကိုယ်ဝန်သည်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ နောက်ဆင်တစ်ကောင်ဟာ သွားလေရာ လိုက်ပေးတတ်တာကို ဖေဖေ့ တပည့်တွေ ရှင်းပြပေးတုန်းက ကျွန်မ အဲ့ဒီဆင်ကြီးကို အလိုလိုလေးစားလို့..။ ဖမ်းလာတဲ့ ဆင်ရိုင်းတစ်ကောင်ကို သူမာန်ချတဲ့ အထိ ကျုံးသွင်းယူရတာတွေ ပထမဦးဆုံး ကြည့်ဖူးတဲ့ ညက ကျွန်မ အိပ်မရခဲ့တာ ဖေဖေသိခဲ့တယ် မဟုတ်လား ဖေဖေ..။ ဆင်ရိုင်းတစ်ကောင် မာန်မချ မချင်း ကျုံးထဲကနေ ထုတ်ပေးလို့ မရတာကို သေချာ နားမလည်တတ်သေးခင် အချိန်အထိ ကျွန်မ မှာ မျက်ရည်တွေဝဲလို့..။
သူ့ကို ချုပ်နှောင်ထားမှုတွေ အတွက် ဒေါသတကြီးနဲ့ သူအော်တာတွေ.. သံကြိုးအကြီးကြီးတွေနဲ့ ထူးခတ်ထားတဲ့ ခြေထောက်တွေကို ရုန်းထားရာက စီးကျလာတဲ့ သွေးတွေနဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကြောင့် ကျွန်မမှာ ထမင်းတွေ နင်လို့...။ အစာကျွေးတော့လည်း မာန်မချမခြင်း မစားဘူး တင်းထားတယ်..။ သူမာန်ချချိန်ရောက်တဲ့ အထိ သူ့ကို ကိုင်တွယ်မဲ့ ဆင်ဦးစီးက စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ယူရတာ..။ မာန်စ ချချိန်မှာ ဆင်တစ်ကောင်ဟာ ကြောင်လေးတစ်ကောင်လို နူးညံ့လာတာမျိုးပေါ့..။ အရိုင်းဆင်တစ်ကောင် ဘဝကနေ နူးညံ့လာတဲ့ ဆင်တစ်ကောင် ဖြစ်လာချိန်အထိ ကျွန်မ တစ်ပတ်တိတိ စောင့်ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်..။
ဒီလို အချိန်ပေးကြည့်ဖို့ ကျွန်မရဲ့တောင်းဆိုမှုကို လိုက်ရောပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေ့မေးစေ့ကို ကျေးဇူးတင်စွာ မော့နမ်းမိတော့ ဖေဖေက ကျေနပ်လို့..။ ကျွန်မခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ဖွဖွလေး ဖွရင်း ငုံ့ကြည့်နေခဲ့တဲ့ ဖေဖေ့မျက်ဝန်းတွေကို ကျွန်မ မှတ်မိနေသေးတယ်..။ သမီးဆန္ဒ တစ်ခုကို ဖြည့်ပေးလိုက်ရတဲ့ အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ ပီတိကို ဖေဖေက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စားသုံးနေ လိုက်တာလေ...။
ဖေဖေနဲ့ အတူတူ တောထဲလိုက်သွားခဲ့တဲ့ လေးကြိမ်မြောက်ခရီး ကျွန်မရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဆင်မလေး တစ်ကောင်မွေးခဲ့တာ ကျွန်မ ဘဝမှာ မေ့မရဆုံးဆိုတာ ဖေဖေသာရှိနေသေးရင် တူတူပြန်ပြောချင်တယ်..။ ဆင်ဦးစီး ဦးဦးက ကျွန်မနံမည် နှစ်လုံးကို ယူပြီး ဆင်ပေါက်စလေးကို နံမည်ပေးတော့ ဖေဖေက ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်နေခဲ့တာ..။ ဖေဖေ့သွားရှည်ရှည်တွေ ပေါ်အောင်ရယ်တိုင်း ဖေဖေ့မျက်နှာက ကျွန်မဖြစ်ဖြစ်သွားသလို..။ ဖေဖေ့နှုတ်ခမ်းဘေးက တွန့်ဝိုက်သွားတဲ့ အကွေးလေးတွေနဲ့ ဖေဖေ့မျက်နှာက သိပ်ယောက်ျား ပီသတာပဲ..။ အနည်းငယ် အနောက်တိုင်း ဆန်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ဖေဖေဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မိသားစုကို အကြင်နာတတ်ဆုံး ဟီရိုးတစ်ယောက်လို မြတ်နိုးဖွယ် အကောင်းဆုံး လူသား..။ ကျွန်မရင်ကို အနွေးထွေး အလုံခြုံစေဆုံး ယောက်ျား..။
ဆင်ဦးစီးနှစ်ယောက်ကို ပြန်သတ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး ဆင်ကြီးတစ်ကောင်ကို ပြခဲ့တုန်းက သူ့ မျက်လုံးတွေထဲကို အကြာကြီး သေချာစိုက်ကြည့်ခဲ့မိတယ်..။ ဖေဖေကတော့ အခါတိုင်းတွေထက်ပိုပြီး ကျွန်မလက်တွေကို တင်းနေအောင် ဆုပ်ကိုင်ဆွဲရင်း ကျွန်မ ပုခုံးတွေကို ဖက်ထားခဲ့တာ..။ ရွှေခဲ ဆိုတဲ့ သူ့နံမည် ကို ကျွန်မဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး..။ သူ့မျက်လုံးတွေကို ကျွန်မကြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာတော့ ပကတိဖြူစင်နေတဲ့ ကလေးလေး တစ်ယောက်လို လဲ့နေတာ သိပ်လှနေခဲ့တယ်..။ သူသာ ကျွန်မနဲ့ စကားပြောတတ်မယ် ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးခဲ့မိချိန်တုန်းက ကျွန်မ အသက် ၁၂ နှစ် သမီးပဲ ရှိသေးတာ..။
ရွှေခဲ ကိုယ်တိုင်ကကော အသိလွတ်ချိန်မှာ သတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူ့သခင် နှစ်ယောက်ကို တစ်ခါတလေမှာ သတိများ ရနေမိမလားလို့ ကလေးအတွေးနဲ့ ကျွန်မ တွေးနေမိခဲ့တာ အဲ့ဒီတစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး..။ သူ့အစွယ်တွေကို ဖြတ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် ကျန်နေသေးတဲ့ အပိုင်းမှာတောင် ဖြူလဲ့ပြီး သန်မာနေလိုက်တာလေ..။ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက ကျွန်မ ရွှေခဲကြီးကို မကြောက်မိသလို မုန်းတီးစိတ်လည်းမရှိခဲ့ပြန်ဘူး..။ သူနဲ့ စကားတွေ ပြောချင်စိတ်ကသာ ကျွန်မ အိပ်မက်ထဲအထိ စိုးမိုးလို့...။
~~~ အပြုံးကို ထွေးပိုက်ခြင်း ~~~
ဖေဖေပေးခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ကံကောင်းခဲ့လွန်းသူ ကျွန်မ...။ ဖေဖေ့ရယ်သံတွေနဲ့ အတူတူ ခုထက်ထိ ကျွန်မ လိုက်ရယ်နေမိဆဲ..။ ဖေဖေ့ ဂစ်တာသံ ညက်ညက်လေးမှာ သီချင်းတွေ လိုက်ဆိုနေမိဆဲ..။ ဆေးလိပ်နံ့တွေ သင်းနေတဲ့ ဖေဖေ့ပါးတွေကို ကျွန်မ မော့မော့ပြီး နမ်းနေမိဆဲ...။ ကျွန်မအတွေးထဲမှာ မေမေက ဖေဖေ့ကို “ကို... ရေ..” လို့ ခေါ်လိုက်ချိန်တိုင်း ကျွန်မ လိုက်လိုက်ပြုံးမိနေဆဲ..။ ကြိုးမညီတဲ့ ဂစ်တာ တစ်လက်ကို ကောက်ကိုင် လိုက်မိချိန်မှာ ကျွန်မ ဘေးမှာ ဖေဖေ များရှိနေလေမလားလို့ ခေါင်းငဲ့ ရှာနေမိဆဲ..။
ကျွန်မ အားတွေငယ်လာချိန်တိုင်း မျက်လုံးတစ်စုံကို မှိတ်လို့ ဖေဖေ့ရင်မှာ တိုးဝှေ့နေမိဆဲ..။ ကျွန်မ ခေါင်းမာလွန်းလို့ မေမေက “ဖအေတူ သမီး.... သွားး....” လို့ ချစ်စနိုး အော်ငေါက် ထုတ်ချိန်တိုင်း ကျေနပ်မှုတွေနဲ့ ကျွန်မ ခေါင်းခါရယ်မောမိဆဲ..။
အထူးဆန်းဆုံးကတော့ ကျွန်မနဲ့ ဘဝခြားသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဖေဖေ့ကို လွမ်းဆွတ်တိုင်း ရင်ခုန်သံတွေ နူးညံ့စွာနဲ့ ကျွန်မ ပြုံးနေမိခြင်းပါပဲ..။ ဖေဖေ့ကို တမ်းတမိတိုင်း ကျွန်မဘယ်တော့မှ မျက်ရည်မကျတတ်...။ ဖေဖေ့ကို မြင်တွေ့ချင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ ငိုမိမှာ မဟုတ်ဖူး ဖေဖေ...။ ကျွန်မသိပ်ချစ်တဲ့ ဖေဖေဟာ ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုသာ ချုပ်ငြိမ်းသွားတာလေ...။ ဘယ်အရာနဲ့မှ လဲလှယ်လို့ မရနိုင်တဲ့ နူးညံ့မှုတွေနဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ ဖေဖေ ရှင်သန်နေဆဲမို့ပါ...။
ဒီလထဲမှာပဲ ဖေဖေ ဟိုးအဝေးကြီးကို ကြိုထွက်သွားနှင့်တာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု ကျော်လာခဲ့ပြီ..။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် အားရကျေနပ်မှု မရှိခြင်း သက်သက်တွေနဲ့ ဖေဖေ့ကို ခုတလော သိပ်ကို တမ်းတနေမိတာ အမှန်ပါပဲ..။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ မငိုဘူး ဖေဖေ..။ ဖေဖေ့ကို လွမ်းဆွတ်ချိန်တိုင်း ဖအေတူသမီး ကျွန်မ.... တစ်ယောက်ထဲ အလှပဆုံး ပြုံးနေတယ်ဆိုတာ........။
ဖွင့်ဟချက်...။ ။ ကျွန်မဘဝ၏ အကြီးမားဆုံးသော ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခု ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် (ဇူလိုင်လ၊ တစ်ဆယ့်ခြောက်ရက်) ဆိုသော နေ့စွဲ တစ်ခုသို့ ရေးဖွဲ့ပါသည်..။
2010 June Idea Magazine တွင် သို့ ~ ဖေဖေ ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးခဲ့ဖူးပါသည်။
Posted by Khin Lay Ngel at 5/02/2012 12:55:00 AM No comments:
တိမ်လွှာကင်းလို့ လ စသာတယ်..။
လက်လက်ထ လ ရောင်မှာ မှိုင်းပြပြ မျက်ဝန်းနဲ့ အစပြုတော့
ယောင်မှားမှင်သက်..ဝစီပိတ်ကို စ ကျင့်လိုက်တယ်..။
လက်ဖျားတွေအေးစက် အသံမဲ့ စကားက ဗုံးတစ်လုံးအလား
မြေပြင်ကျယ်ဟာ မီးထတောက်ဖို့ နှလုံးသားကို တည်ကြက်လုပ်တော့
မဲ့ပြုံးလေးတောင် မပြုံးမိအောင်အံကိုကြိတ်လို့ အကြံကိုထုတ်တယ်...။
အဲ့ဒီည... ကမ္ဘာမြေကို သွက်သွက်ခါစေဖို့ ဆာကေးတစ်ခွက်
အမြည်းမရှိတဲ့ ကမ္ဘာဟာ အနမ်းတွေ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်နဲ့
အလွမ်းတွေက ဝုန်းဒိုင်းကျဲ နာကျဉ်ခြင်းတွေ လျှပ်လိုထ အလက်
တရားပျက်မယ့် မိုးခြိမ်းသံနဲ့အတူ မျက်ရည်တွေ ရွာအချမှာ
နှုတ်.. ဆက်.. တယ်... "ကဝေ"။
Posted by Khin Lay Ngel at 5/01/2012 11:43:00 PM No comments:
အမောတကြီး ပြေးကပ်လာတဲ့ လေ-တစ်စ
ယောင်ပြီး တ မိတယ် “ကဝေ”..။
သတိရတဲ့အခါ ထုတ်ကြည့်ဖို့ ~
Posted by Khin Lay Ngel at 5/01/2012 11:23:00 PM No comments:
Posted by Khin Lay Ngel at 5/01/2012 11:05:00 PM 1 comment:
ကဝေကိုက်တဲ့ ဆောင်းတစ်ည ~ (Was Posted On Tuesday, April 21, 2009)
ဒီည အတော်လေး အေးတယ်.. ဒီဂရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ဇီးရိုး..!! အချိန်က ညသန်းခေါင်ကျော်ကာစ ၁၂း၃၅ လောက်ရှိမယ်..။ အပြင်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘူး.. ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း..။ လွတ်လပ်မှုတွေ နဲ့ အားပါးတရ ပျံသန်းနေဆဲ “ဝုန်း..” ဆိုပြီး အရမ်းလှတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက် မျက်လုံး ရှေ့ မှာ ပေါ်လာတယ်.. ဒါ ရိုးရိုးတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး... ဘယ်လိုပါလိမ့်..!!
သူ့ကို မြင်တာနဲ့ ကျွန်တော် အလန့်တကြား သိလိုက်ပြီ.. “ကဝေမ” တစ်ယောက်ဆိုတာ... သူ ကျွန်တော့်ကို ပညာတွေ စပြတယ်.. ၁၂ကြိုး.. ၁၃ကြိုး.. ၆ကြိုး.. ၅ကြိုး... အိုး.. ဟို့..!! အကုန်စုံသွားတာပဲ.. ကျွန်တော် စောင့်ကြည့် ရင်းနဲ့ ကြက်သီးတွေ ထနေတယ်.. သူ ကြိုးလွဲသွားမှာကိုလေ..။ ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော် လည်း ဒါမျိုး မကြောက်လို့ ဒီလိုအချိန်မှာ ရွာရိုး ထွက်လျှောက် လာတာပဲ မဟုတ်လား..!! ကျွန်တော်လည်း ဒီ လောကသား ဆိုတာကို သူသိပုံမရဘူး.. ဒါပေမယ့် သူနဲ့ ကျွန်တော်က လိုင်းတော့ မတူဘူး..။ အထီးကျန်ကျန် နဲ့ ထွက်လာတာတော့ တူပုံ ရတယ်..။
ကျွန်တော်က ၁၅ ကို ဘောင်တက်ထားတဲ့ သေသူ ဖြစ်နေ ပြီးသား.. ဒါပေမယ့် သူ့ကို ကျွန်တော် အလစ် မပေးရဲဘူး..။ သူက မျက်လုံး တောက်တောက်တွေနဲ့.. ကျွန်တော့် ဝှက်ဖဲကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ရဲ့ မှောက်ထားတဲ့ တစ်ချပ်ကို မှန်းထားပြီးသား..။
မရည်ရွယ်ပါဘူး.. စိန်ခေါ်သလို အကြည့်တွေ နဲ့ စ လာလို့ ကျွန်တော့် ဝှက်ဖဲကို လှန်ပြလိုက် တယ်ဗျာ..။ သူ စက္ကန့်ဝက်လောက် အသက်ရှူ ရပ်သွားတယ်.. ဘာများ ဖြစ်နိုင်လဲ ဆိုပြီးပေါ့..!!
ကျွန်တော် ဝှက်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Queen ကို ကြည့်ပြီး.. ပထမ သူပြုံးတယ်.. နောက်.. ဟက်ဟက်ပက်ပက် အော်ရယ်ရင်း သူ့ King တစ်ပါးကို ခပ်ကြွားကြွားလေး လှမ်းပြတယ်..။ သေနေသူချင်း အတူတူ နောက်ဆုံး သူကိုယ်တိုင် ဝန်ခံသွားခဲ့တယ်.. Queen ဖြစ်မယ်လို့ သူ.. ထင်မထားခဲ့ပါဘူး တဲ့..!! သူ့ပညာ မြင့်မမြင့် မသေချာပေမယ့် လုံးဝ မနိမ့်ဘူး ဆိုတာ ကြောက်ခမန်း လိလိ ကျွန်တော် သိနေပြန် တယ်..။
ကျွန်တော့်ကိုလည်း သူ့သားကောင်ဖြစ်အောင် တခြားနည်းတွေ ပြောင်းပြီး အမျိုးမျိုး ပညာစမ်း ဖမ်းစားနေ သေးတာ.!! သူ့ရဲ့ ရာဇဝင်ကို ကျွန်တော့် အာရုံနဲ့ မသိမသာ ခိုးကြည့်တော့.. ဟိုက်ရှားဘားးး.. မနည်း ပါလား..!! သူ့ စက်ကွင်းမှာမိလို့ ခစားနေ ကြတဲ့ သူတွေ.. ကျွန်တော်လည်း ပါမသွားအောင် သတိနဲ့ အသက်တွေ ရှူပြီး ရင် တလှပ်လှပ် စောင့်ကြည့်နေ ခဲ့ရတယ်..။
တစ်ချက်မှ အလစ်ပေးလို့ မရသလို ခြေချ မှားလို့ မဖြစ်ဖူးလေ..။ ဒီလိုနဲ့ ညသန်းခေါင် အချိန်ဟာလည်း နက်သထက် နက်လို့လာပြီ ကျွန်တော်ပြန်ရတော့မယ်.. စကားစကို ဖြတ်.. လက်ပြနှုတ်ဆက် ပြန်ခဲ့တယ်..။ ဘာလို့မှန်း မသိဘူး လေတစ်ချက်ချွန်လို့ ကျွန်တော်ပျော်ပြီး ပြန်ခဲ့တယ်..။ အပြန်လမ်းမှာ လွတ်အောင် ရုန်းခဲ့နိုင်တာလား..!! ငြိတွယ် ကျန်ခဲ့တာလား..!! ဝေဝေဝါးဝါး တွေးရင်း ကျွန်တော့်အာရုံမှာ ကဝေမ ကပ်ပါ လာတယ်...။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်တော့ လွတ်မြောက် လာပြီဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အသက်ကို တစ်ဝကြီး ရှူရင်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ချ လိုက်တယ်..။ “ဖြတ်” ကနဲ မျက်လုံးကို ဖွင့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံး တဆစ်ဆစ်နဲ့ နာကျဉ်ကိုက်ခဲလို့..။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၉း၃၀..။ “ဟိုက်..!! သွားပြီ... အလုပ်သွားဖို့ နောက်ကျနေပြီ..” ကျွန်တော် အလန့်တကြား ရေရွတ်ရင်း ပြုံးလိုက်တယ်.. ကျွန်တော် မနေ့ညက ကဝေမ တစ်ယောက် အကိုက်ခံ ခဲ့ရ တာပါလား..!!
သေချာတယ် ကျွန်တော့်စိတ်တွေ တစ်ချက်ပါသွား ခဲ့ပြီ... အဲ့ဒီ က.. ဝေ.. မ.. ဆီ.. ကို....။
ကဝေ တစ်ကောင်သို့ ~ (Was Posted On Sunday, April 19, 2009)
ကဝေမ တဲ့.!! စွတ်စွဲတာလား..! တင်စားတာလား..! သရော်တာလား..! မြှင့်ပေးတာလား..! သတ်မှတ် လိုက်တာ လား..! မင်း ချပြ လိုက်တာ လား..! ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နားဝမှာတော့ ချိုခဲ့ပါတယ်..။ မင်း ကိုယ်တိုင်ကကော ကဝေ တစ်ကောင်ပဲ မဟုတ်လား ကွယ်..!! ကဝေဟာ ကဝေညှို့တာ ပြန်ခံရတော့ စုန်းတွေ ထတောက်လိုက်တာ အဲ့ဒီည ကောင်းကင် တစ်ခုလုံး အရောင်တွေ စုံပြီး လက်လက်ကို ထလို့..။
အနီရောင် တောက်တောက်တွေ နဲ့ အပြာရောင်တွေ လွှမ်း အသွား စိတ်နှစ်ခု ရဲ့ ရင်ဘတ်တွေမှာ ခရမ်းပုပ် ရောင် ရင့်ရင့်တွေ က နေရာယူလို့ ပြုံးကြတယ်..။ ပညာချင်း ပြိုင်တာ မဟုတ်နိုင်ဘူး..။ ဒါဟာ ကြိုးနံပါတ် အသစ်တစ်ခုကို အတူတကွ သင်ယူကြတာ မျိုးလေကွာ..။ အဲ့လို မင်း မထင်ဘူးလား..!! အို... မင်းဘယ်လိုထင်ထင်ပါ ဒါကို ကိုယ် စိတ်မဝင်စားဘူး သိလား..! ကြိုးလွဲ သွားမှာကို စိုးရိမ်စိတ်တွေ နဲ့ မင်း ရှိနေခဲ့တယ် ဆိုတာ..။
မင်းလိုပါပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း အသက်တောင် ဝဝ မရှုခဲ့မိပါဘူး..။ သင်ယူနေတဲ့ ကြိုးကွက်တွေ လွတ်ထွက် သွားမှာစိုးလို့ပေါ့..။ ခနဲ့တဲ့တဲ့ ကဝေပြုံးတော့ မပြုံးနဲ့ ကိုယ့်ဆရာရေ~ ကဝေချင်း ခြေမြင်အောင် ပညာတော့ မစမ်းဘူး..။ အနုမြူရောင်ထက် တောက်တဲ့ အရောင်တွေ ကွန့်မြူးတဲ့ ညမှာ မင်းနဲ့ကိုယ်ဟာ ရဲဘော်ရဲဘက် သွေးသောက်တွေ ဖြစ်ခဲ့တာပဲ ဟုတ်..!!
မင်း ငြင်းဖို့ ကြိုးစားမယ်တော့ ကိုယ်မထင်ဘူး ကဝေရေ..။ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို တင်းနေအောင် မင်း စေ့ထားနေမှာ ကိုယ်သိနေတယ်..။ လွှတ်ချလိုက်ပါ.. ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အရာတွေကိုပေါ့..။ မင်း တွေးမတွေးတော့ ကိုယ်မသိဘူး.. ကိုယ်တော့ အသစ် တက်လိုက်တဲ့ ကြိုးအကြောင်းနဲ့ အတွေးတွေက ချာချာလည် မူးနောက် လို့..။
ကဲ.. မင်းဘယ်လိုထင်လဲ ကဝေ..!! ကိုယ်တို့ နောက်တစ်ကြိုး အတတ်ကို အောင်မြင်စွာ ရခဲ့တာလား..!! လေ့လာဆဲ အဆင့်လား..!! ဒါမှမဟုတ် မင်းရော ကိုယ်ပါ ပြိုင်တူ ဂုဏ်ထူးထွက်ခဲ့ကြ တာလား...!! ကဝေတွေတော့ ကြိုးတွေရှုပ်လို့ ရုပ်သေးတွေဖြစ်လိုဖြစ်..။
ဟား.. ဟား.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကဝေမ တစ်ယောက်ကတော့ ကဝေတစ်ကောင်ကို သတိထားလိုက်မိပြီ ဆိုတာလေးပါပဲ..။ ကိုယ်ကတော့ လုံးဝ ပညာစမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး..။ ကစားဖို့ကိုလည်း ကိုယ် စိတ်မဝင်စားပါဘူး ဒါ.. အသေအချာပဲ..။ ကဝေတွေ မှာလည်း ရင်ဘတ်တွေ ကိုယ်စီနဲ့ဆိုတာ မင်း မေ့ထားဖို့ မကြိုးစားလေနဲ့..။
ဒါဟာ ပေါ့ပေါ့လေး မဟုတ်ဖူး ကိုယ့် ကဝေရေ ~
နားလည်မှုတွေ နဲ့ ရင်းထားတဲ့ အရာတွေ အများကြီးဆိုတာ မင်းလည်းအသိ ကိုယ်လည်း အသိနဲ့ မို့ပါပဲ.......။
Posted by Khin Lay Ngel at 5/01/2012 10:59:00 PM No comments:
Posted by Khin Lay Ngel at 5/01/2012 05:51:00 AM 1 comment:
Posted by Khin Lay Ngel at 5/01/2012 05:27:00 AM No comments: